Ny mpahay lalàna ny manam-pahaizana manokana eo amin’ny sehatry ny lalàna. Fantany ny lalàna sy ny fitsipika, mahafantatra ny fomba fampiasana azy ireo ary afaka hampianatra azy ireo ny fototry ny hafa. Manam-pahaizana manokana eo amin’ny sehatry ny lalàna, izay afaka hitondra na inona na inona toerana ara-dalàna avy amin’ny mpisolovava ny mpitsara. Izany no ilaina mba hahazoana mari-pahaizana momba ny lalàna.
Ny firongatry ity sehatry ny fahalalana efa nitranga tany Roma Fahiny.
Izany eto fa niseho voalohany solontenan’ny lalàna — cartridges
Ho azy ireo ny fanapahan-kevitra ny fifandirana ara-pitsarana sy ny zavatra atao dia ny foto-kevitra ny tsy mivantana ary nandry teo an-tsorony ny mpisorona. Noho ny fahatongavan’ny cartridges ara-dalàna ny fahalalana efa mandroso haingana dia haingana. Voalohany, dia ny herin’ny fanapahan-kevitra nandry teo an-tsorony ny amperora, mpanjaka sy ny lohan’ny Firenena.
Ny orinasa efa nivoatra, niseho ho mpiaro sy mpampanoa lalàna.
Teraka ny fitsarana sy ny rafi-pitsarana
Rehefa nandeha ny fotoana ny lalàna efa lasa any amin’ny malalaka kokoa ny orinasa. Ny fototry ny lalàna dia ny fivavahana, ny didy avy ao amin’ny Baiboly dia ny voalohany dia ny lalàna. Izy ireo no nanao ny fitsipika, izay maha-olombelona izao manaraka izao amin’izao andro izao. Ny fampandrosoana ny lalàna efa miadana, ny fampidirana ny lalàna amin’ny alalan’ny Tsar Petera Voalohany. Izany no izy izay nanome hitsangana ho amin’ny fampandrosoana ny ara-dalàna sehatry ny firenena.
Avy eo dia fitsarana revolisiona
Fotsiny rehefa tsy nahazo ny ara-dalàna ny rafitra, akaiky ny ankehitriny.Amin’izao fotoana izao, ny lalàna dia maro sampana, ny fahalalana sy ny fahaiza-manao. Izany dia ahitana ny rafi-pitsarana iray manontolo, ny fahalalana ny lalàna sy ara-dalàna ny fenitra sy fomba fanaraha-maso azy ireo mazava tsara hihazakazaka amin’ny maha-olona sy nikarakara ny rafitra